“သစ်စာဖောကျ” နှငျ့ “မကောငျးသော အရငျးရှငျ” ဟူ၍ စှပျစှဲခကျြမြားသညျ ပွီးပွညျ့စုံသော မုနျတိုငျးတခု ထုတျလုပျမညျ - Pandaily
Categories: Industry ကိုGloria Li ဇူလိုငျ 28, 2021 ဇူလိုငျ 28, 2021 မှာ Posted
တရုတ်တွင် ထိပ်တန်းကားတစီး ပလက်ဖောင်းပေါ် ထိုးကျDieလှနျခဲ့သော ရကျသတ်တပတျအနညျးငယျက အလှနျအမငျးကဆြငျးသှားခဲ့သညျ့ နယူးယောကျရှိ ဒျေါလာ ၄၄ သနျးတနျ IPO အမွငျ့ရှိ မိုဘိုငျးဖုနျးဆိုငျမြား အားလုံးသညျ တရုတျနိုငျငံမှ ပြောကျကှယျသှားခဲ့ရသညျ။ ဇွန် ၃၀ ရက်က Wall Street တွင် ရွှဲရွှဲရွှဲဖြင့် ပွဲဦးထွက် ပြသပြီးနောက် ၄၈ နာရီမပြည့်မီ တရုတ်အားပြိုင်မှု ပြုလုပ်ကြေညာဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဆိုငျရာ စဈတမျးကို “အမြိုးသားလုံခွုံရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အကြိုးစီးပှားကို ကာကှယျရနျ” ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ကောကျယူခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ အသဈစကျစကျ drip user တှကေို မှတျပုံတငျတာတှေ ရပျဆိုငျးတာ၊ ဒေါငျးလုပျဒျဆှဲတာတှေ ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။
Topics: မွငျကှငျးDrip Top Application ဆိုငျမြား မှတျပုံတငျခှငျ့ ရပျဆိုငျးထားဟု သုံးစှဲသူမြား ပွော
ဘဂေငျြးဘကျက ထိနျးခြုပျထားတဲ့ တရုတျရဲ့အလငျြအမွနျတိုးတကျလာနတေဲ့ အငျတာနကျလုပျငနျးကွီးရဲ့အဆုံးအဖွတျ ဟာ တရုတျနညျးပညာကုမဏီကွီးတှရေဲ့ မရရောတဲ့ အရိပျအောကျကနေ ရှဲရှဲရှဲ ကဆြငျးသှားစခေဲ့တယျလို့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေ နှဈသကျကွပါတယျ။ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်စာရင်းအရ ရှယ်ယာတစ်ဟုန်ထိုးကျဆင်းပြီး ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှစ၍ ရှယ်ယာတစ်ဒေါ်လာ ၈,၀၆ ဒေါ်လာအထိ ကျဆင်းကာ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းကာ ဈေးကွက်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၂၀ ခန့်၊ IPO ရှယ်ယာတစ်ဒေါ်လာ ၁၄ ဒေါ်လာအောက် ကျဆင်းခဲ့သည်။ တရုတျအငျတာနကျအသုံးပွုသူတှဟော အာဏာပိုငျတှရေဲ့ အားပွိုငျမှုတှအေပွငျ အပွငျမှာဖိအားတှေ ပိုမိုမွငျ့တကျလာပွီး အမြိုးသားရေးဝါဒနဲ့ အရငျးရှငျစနဈဆနျ့ကငျြရေးစိတျဓာတျတှကေလညျး Drip Catalytic ဖွဈလာပွီး ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ မကွုံစဖူး မွငျကှငျးတှကေို ဖနျတီးခဲ့ကွပါတယျ။
တရုတ်အင်တာနက် ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေဟာ Drip အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေချိန်ကစပြီး အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကို ရောင်းချရာမှာ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ သုံးစွဲသူတွေ၊ ပထဝီဝင်နဲ့ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ကောလာဟလတွေ အွန်လိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ Weibo နှင့် အခြားSocial Media Platform များတွင် လူသိများသည့် Weibo နှင့် Share အသုံးပြုသူများ ၂၀၁၅ ဒေတာကြီးကိုစိစစ်ခြင်းနညျးပညာမီဒီယာမြား၏ “သဘောတူညီခကျြ”ပါ အခကျြအလကျမြားသညျ အခြိနျပို အခြိနျပို ပမာဏ နှငျ့ မျောဒယျကို ဖျောပွရနျ ဗဟိုအစိုးရ၏ အဂေငျြစီဝနျထမျးမြားကို အသုံးပွုခွငျးနှငျ့ ယငျးအခကျြ အလကျမြားကို ကိုးကားဖျောပွခွငျးတို့အတှကျ အထောကျအပံ့ ဖွဈစသေညျ့အပွငျ နိုငျငံတျော လုံခွုံရေးအတှကျ လြှို့ဝှကျခကျြ ပေါကျကွားစခွေငျး စသညျ့ အထောကျအထားမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ Drip Drip ၏ ထုတျပွနျခကျြမြားသတင်းပို့.
လလေ့ာသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဆိုဖီယာဝမျ(Sophia Wang) က Drip ဟာ အခုလို ပူးတှဲထုတျဝတေဲ့ ရောငျးဝယျ ဖောကျကားသူလို့ ယုံကွညျပွီး အငျတာနကျသုံးစှဲသူတှကေို “မဆီမဆိုငျ “Drip ” လို့ စှပျစှဲထားပါတယျ။ “ အမေရိကန်မှာ စတော့ရှယ် ယာတွေ ရောင်းဖို့၊ ရွှဲရွှဲပြောင်းဖို့ အရင်ကလည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒီအစီအစဉ်ဟာ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့လည်း လုံးဝနားလည်ပါတယ်၊ ဒါဟာ သာမန်မဟုတ်ပါဘူး. ဒီလုပ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ဖြစ်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး” ဟု Wang က Pandaily နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းက အမည်မဖော်လို၍ “ ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက် ၍ မည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမျှ မပြောလိုပါဘူး” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဝမ်သည် အမျိုးသားရေးကွန်ရက်သုံးစွဲသူများ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကို သဘောတူကြောင်း ဘေကျင်းက ကြေညာခဲ့ပြီး ယင်းအချက်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားဝင်ဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုပင်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဆိုကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီကောလာဟလ ရေစီးကြောင်းဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ နယ်စပ်ဒေတာစီးဆင်းမှု အားကောင်းလာမှုနဲ့ ပြည်ပမှာ စာရင်းပြုစုမှု ပိုမိုတင်းကြပ်လာမှုကို အားပြိုင်စေပါတယ်” ဟု ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Topics: မွငျကှငျးအားပွိုငျမှု ပိတျဆို့ခံနရေသညျ့ တရုတျဆိုကျဘာနရော အားနညျးခကျြ
ဇူလိုငျ ၁၀-တရုတျဆိုကျဘာစညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဂေငျြစီက အာကာသအဆိုပွုပြဌာန်းချက်အသစ်အရ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော်၏ အချက်အလက်များကို ကိုင်စွဲကာ သုံးစွဲသူများကို လက်ခံခြင်း၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ယင်းအချက်အလက်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကိုးကားပြီး “နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အမြတ်ထုတ်မှု” ကို သက်ရောက်စေနိုင်သည်။
အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဒေါသဟာ Downtrip ကိုလည်းတစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဒီတက္ကစီကားကြီးဟာ အရင်ကလက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ တရုတ်လူ့ဘောင်မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝရေးကိုမကျေမချမ်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
တရုတျအစိုးရပိုငျ ဆငျဟှာသတငျး ဌာနတဈခုတှငျသုံးသပ်ချက်မေလဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် Drip အသုံးပြုသူများက ယာဉ်စီးခများ ပိုမိုပေးဆောင်ရခြင်းနှင့် ယာဉ်မောင်းများက ယာဉ်စီးခများ လျော့နည်းပေးဆောင်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ယင်းပလက်ဖောင်း၏ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှု ယန္တရားများကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဝဖေနျမှုမြား ထုတျဖျောပွီးနောကျ ကုမ်ပဏီကိုအသေးစိတ်ပထမဆုံး ထုတျပွနျတဲ့ ဝငျငှခှေနျ ဖှဲ့စညျးပုံအရ Drible Car Network ဟာ ယာဉျမောငျးသူရဲ့ ပမျြးမြှဝငျငှေ ၇၉% ကို ဖောကျသညျတှကေို ပေးရတာဖွဈပွီး၊ ကုမ်ပဏီဟာ သူ့ရဲ့ ပလကျဖောငျးပျေါကနေ အမွတျငှေ ၂.၇% ကို ၃၀% ကြျောသာ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Drip ဟာ နောကျနောငျမှာလညျး သူ့ရဲ့ ယာဉျမောငျးအပျေါ ငှပေေးခမြှေု ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ ယာဉျစီးခတှကေို တိုးမွှငျ့ပေးမယျ့အကွောငျး သုံးစှဲသူတှကေို ကတိပွုခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ သုံးစှဲသူတှကေ ကုမဏီရဲ့ ကတိစကားအတိုငျး မဝယျကွပါဘူး။ သညျစညျးမဉျြးဟာ ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးအတှကျ ဆငျဆာဖွတျတောကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြတဈရပျဖွဈတယျလို့ အမြိုးသားရေးကှနျရကျသုံးစှဲသူတှကေ နှေးထှေးစှာတုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
“ ဒီအရငျးရှငျတှဟော သှေးစုပျဖုတျကောငျတှရေဲ. အမြိုးသားအကြိုးစီးပှားအတှကျ ငှကွေေးလဲလှယျသုံးစှဲကွတယျ” လို့ တှဈတာသုံးစှဲသူတဈဦးက ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
“ တရုတ်က ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ. မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အရင်းရှင်တွေဆင်းရိုက်သင့်ပါတယ်!” ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Drip အသုံးပြုသူများက app ပို့စ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းScreenshotအွန်လိုင်းကနေ သူတို့ဘာသာ ဖြေရှင်းပြတယ်။ အောငျသူစာရင်းများ“ The Car Player Application Programme” ကို Weibo ပျေါမှာ ထပျဆငျ့တငျခဲ့ပွီး ထပျဆငျ့တငျသူ ၂၀၀၀၀ ရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ပြီးခဲ့သောအပတ်က အလယ်ပိုင်းရှိ ဟီနန်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေကြီးမှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တွင် ရွှဲရွှဲက ယွမ် ၁ သန်းလှူဒါန်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး ဒေသနေပြည်သူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအတွက် ကူညီရန်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ကူညီခဲ့သည်။ သညျကုမ်မဏီဟာ သညျလှုပျရှားမှုကို အသုံးပွုသူတှကေို ပွညျနှငျဒဏျပေးခဲ့တယျလို့ တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
“ သန်း ၁၀၀ အမြတ်အစွန်းလေးကို Drip Bright Driving Broken ဆိုတဲ့ ယာဉ်မောင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရောင်းချပြီး အမြတ်အစွန်းအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်” လို့ Weibo သုံးစွဲသူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
“ အရငျးရှငျတှကေတော့ ပုတျသငျညိုတှရေဲ. ကောငျးမွတျလှနျးတဲ့ ပိုကျဆံတှကေို အသုံးပွုကွပွီး လူအစုလိုကျအပွုံလိုကျ အနိုငျယူစတော ဖွဈပါတယျ” လို့ အခွားသောသုံးစှဲသူတဈဦးက သရျောစာတဈခုနဲ့ အနမျးပေးရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သို့သော် ဆိုက်ဘာအသုံးပြုသူအချို့က ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ရှုမြင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ “ အမှန်တော့ Drip လုပ်တာတော့ ကောင်းပါတယ်” ဟု မှတ်ချက်ပေးသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ “ ရွှဲရွှဲရွှဲ ကမ်းပြိုမှုကို ပြသဖို့ ထိုက်တန်ပေမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်မှာလည်း ချီးကျူးမှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်” ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ဖြေကြားခဲ့သည်။
Bloombergသတင်းပို့ဇူလိုငျ ၂၂-တရုတျစညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဂေငျြစီက “ပွငျးထနျတဲ့ပွဈဒဏျတှေ” ထမျးဆောငျဖို့ စဉျးစားနတေဲ့ Drip ဟာ ယခုနှဈအစောပိုငျးက အလီဘာဘာ အပါအဝငျ ဒျေါလာ ၂၈ သနျး ဒဏျကွေးပေးဆောငျခဲ့တဲ့ စံခြိနျကို ကြျောလှနျနိုငျခဲ့တဲ့ လုပျငနျးအခြို့ကိုရပျဆိုငျးဖို့ နိုငျငံပိုငျရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေို မိတျဆကျပေးဖို့ ဖိအားပေးခဲ့သေးတယျလို့ အမရေိကနျစတော့ဈေးကှကျနဲ့ နီးစပျတဲ့ သတငျးရငျးမွဈတှကေို ကိုးကားပွီး သညျစကားက ဆိုပါတယျ။